Dadaalkii Xukuumadda & Guusha Doorashada Yaanay Xagal Daacin Mucaaradku / Qalinkii Hassan Ahmed Yousuf | Gaaroodi News
Hargeisa(Gaaroodinews) Axsaabta Mucaaradka ee ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaankaba, miyaa la moodaa inay hadana iyagu dib ugu guurayaan halkii shalay laga soo hayaamay?
Sii wadida nidaamka dimuqraadiyadda iyo hannaanka axsaabta badan sida ku salaysan dastuurka qaranka xubintiisa 2aad, qodobka 9aad ee nidaamka siyaasadda oo ay saldhig u yihiin doorashooyinka xorta ahi wuxuu sida dhabta ah u leeyahay ahmiyad weyn iyo faa’iidooyin badan geeddi socodka horumarka shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, nabadgelyada qaranka, ku dhaqanka sharciga (Rule of law), hanaqaadka siyaasadda arrimaha debadda, soo jiidashada maalgashiga shisheeye & iskaashiga caalamka, hanashada aqoonsi caalami ah iyo hiigsiga barwaaqo qarankani gaadho Insha Allaah.
Sida la ogyahay qabashada doorashooyinku waa hawl culus oo maaliyad dhaqaale, cudud shaqaale, aqoon farsamo, ilaalin nabadgelyo, shuruuc lagu maamulo iyo diyaar garaw badan u baahan, arrimahaas oo inta badan sabab u noqon jiray dib u dhacyada ku imanayay inay doorashooyinku ku qabsoomaann wakhtigooda haddii aanay jirin duruufa kale sida sharciga waafaqsan. Dhammaan doorashooyinkii ka horreeyay tan maanta 2021, Somaliland waxay ku qaban jirtay doorashada iskaashiga kuwa lagu magacaabo deeq bixiyayaasha Ilaahay baa deeq bixiyee xagga dhaqaalaha iyo xagga farsamadaba.
Qabsoomidda doorasho kasta waxaa uu xilka ugu weyni ka saaran yahay Xukuumadda iyo Madaxweynaha xilka haya markaas (Head of State). Ka sokow doorka ay daneeyayaasha kala duwan ee bulshada sida hoggaamada Axsaabta Qaranka ee siyaasaddu ku leeyihiin hawsha doorashada bilawga illaa dhammaadka, hadana sida xaqiiqada ah qabashada doorashada, guusheeda iyo guul darradeedaba waxaa leh masuuliyadda koowaad Madaxweynaha talinaya iyo Xukuumaddiisa. Doorashooyinka Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka Somaliland waxaa la sugaayay muddo dheer. Xisbiyada Mucaaradku waxay aad bay uga qaylinayeen, kuna dhaliilayeen xukuumadihii kala dambeeyay in la qabto doorashooyinka. Waxaa la is waydiin jiray labada doorasho ee Wakiillada iyo Deegaanka teebaa horrayn doontaa, miyaa se mar la wada qaban karaa labada doorasho maadaama oo la ogyahay culayska ay leeyihiin iyo baaxadda shaqo ee ay koobsanayaan. Nasiib wanaag, Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Xukuumaddiisu waxay muujiyeen dadaal badan, daacadnimo, masuuliyad, karti iyo hufnaan shaqo iyo bisayl siyaasadeed inay ku dhiirradaan go’aankeeda (High political commitment). Sidaan kaga hadlay maqaal hore oo la daabacay maalin ka hor doorashada, Madaxweynuhu wuxuu suurtageliyay illaa bilawgii diyaar garawga jawi habboon oo talo wadaag, wadatashi iyo wada shaqayn xooggan leh oo Axsaabta Qaranka, Madaxtooyada iyo KDQ ku ka yeelanayeen ammuuraha doorashada kaasoo ahaa mid ay bulshadu ku diirsanayeen oo rajo gelinayay, isla markaana ahaa hannaan dhiirrigelinayay wada shaqaynta, iskaashiga, isku duubnida, midnimada iyo wadajirka dhinacyada oo dhan iyo guud ahaan bulshada Somaliland. Waxaa si hagar la’aan ah loo fuliyay hawlgalkii diiwaangelinta guud ahaan dalka oo ay weliba doorkan muwaadiniin in badan tabayay xuquuqdooda doorasho iyo siyaasadeed si ballaadhan oo bogaadin leh uga qaybgaleen deegaanno badan gaar ahaan gobollada bariga Somaliland iyadoo fursado badan oo kala dambeeyay la siinayay shacabka inay kaadhadhka qaataan dhammaan magaagooyinka iyo degmooyinka dalka.
Waxaa xusid mudan inay ahayd markii u horraysay taariikhda dalka JSL ee laga maarmo in loo baryo tago gacmo shisheeye balse taas bedelkeeda si gobanimo leh la isku tashaday oo dakhliga cashuurta muwaadiniinta Somaliland iyo miisaaniyadda dawladda lagu xisaabtamay taasoo noqotay arrin sumcad weyn iyo sharaf badan usoo hoysay doorashooyinkii May 31 2021 iyadoo weliba ay ahayd markii u horraysay ee doorashooyin noocan ah oo isku sidkan isku mar laga qabto dalka. Warbaahinta Qaranka waxaa loo isticmaalayay si sinnaan iyo caddaalad leh xilligii ololaha, waxaa si buuxda loogu dhaqmay ama la ilaaliyay ku dhaqanka xeerarka iyo anshaxa ka qaybgalka doorashada. Waxaanay soo saartay madaxtooyadu awaamir badan oo lagu xaqiijinayo ku dhaqanka xeerarka doorashada iyo in laga ilaaliyo waxkasta oo sumcad xumo, xagal daacin iyo shaashayn ku keeni karayay ololaha iyo habsami u socodka hawlaha doorashooyinka, xagga Ilaahayna laga aqbalay oo aan deero deero hirdiyin.
Qabsoomidda doorashooyinkii isku sidkanaa Madaxweynaha Somaliland wuxuu mudnaanta siiyay inay doorashadu ku dhacdo “Doonaa ha helayee” saaxad caddaalad ah oo KDQ ee la dhaariyay u madaxbanaan yihiin shaqadooda heer goobeed illaa heer qaran, isla markaana aanay dhicin wax farogelin ah oo debadda kaga timaada, KDQ kuna si xilkasnimo leh ayay u oofiyeen dhaartii Ilaahay iyo ballantii ay shacabka u qaateen. Jiritaankeeda tan waxaa kuu caddaynaya inay doorashadani noqotay tii u horraysay ee si aan muxaafid iyo mucaarad la kala lahayn kii guulaystay iyo kii aan ku soo bixini ba ku wada qanceen natiijadii codbixinta lagu dhawaaqay, sidaana ay ku noqotay doorasho xor iyo xalaal ah, aan wax saamayn taban ah, turxaan iyo xanaf ku reebin dalka iyo dadweynaha Somaliland gude iyo debad ba.
Saaxafaddii ugu badnayd ee caalamka tu dawladeed iyo mid madaxbanaan ba ayaa waxka qoray ama baahiyay qoorashooyinkii taariikhiga ahaa ee ka qabsoomay Somaliland May 31, 2021, waxaana xusid mudan in goob joogayaasha ka soo qaybgalay doorkani ahaayeen kuwii ay Somaliland u baahnayd markhaatigooda waayo waxay intooda badan ka socdeen wadamada Afrika oo aad loogu baahnaa inay xog ogaal u noqdaan xaqiiqooyinka ka jira Somaliland.
Ilaahay baa mahad oo dhan leh oo si nabadgelyo ah, jawi deggan iyo si wanaag badan leh innagu guuleeyay doorashooyinkii, waana in looga mahad celiyo shacabka Somaliland, Madaxweynaha Qaranka JSL, KDQ, CIidamada Ammaanka, Hay’adaha Dawladda ee dadaalka dheeraadka ah ka geliyay hawshii doorashada, Axsaabta Qaranka, Tartamayaashii kunka ku dhawaa iyo cidkasta oo door ku lahayd hawsha doorashada, Ilaahay ha ka abaal mariyo wanaagga ay dadkooda u qabteen iyo guusha ay gaadhsiiyeen Somaliland.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Xukuumadda uu gadhwadeenka ka yahay uu ka mid yahay Dr. Sacad Cali Shire Wasiirka Horumarinta Maaliyadda JSL ayaa leh mahad celinta iyo bogaadinta koowaad, waxaanay si gobanimo leh uga soo baxeen xilkii iyo waajibaadkii qaran ee ka saarraa suurtagelinta doorashooyinkii isku sidkanaa ee taariikhda galay, guushuna waxay usoo wada hoyatay guud ahaan bulshada Somaliland gude iyo debad ba iyo qaranka JSL. Waxaa markaa halkan laga garan karaa ama laga saadaalin karaa in Xukuumadda talada haysaa ay si la mid ah doorashadan ka go’antahay qabashada hawsha diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo doorashada axsaabta qaran ee iyagana wakhtigoodu dhaw yahay, isla markaana ay dad badan oo han hoggaamiye lehi si xamaasad leh u sugayaan, isla markaana laga yaabo in qabashadeedu tan ka sii fududato tii 2012 ee ka horraysay.
Haba horaa loo soconayee, axsaabtii qaranka oo iyagu ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaankaba, miyaa la moodaa inay iyagu dib ugu noqonayaan halkii shalay laga soo guuray? Waayo, lama filayn inay ku mashquulaan isu bahaysiga illaa maayarada degmooyinka yaryar. Guushii doorashada kadib, waxaa la filayay inay immikana ku qalqaaliyaan xukuumadda sidii loogu diyaar garoobi lahaa diiwaangelintii ururada wakhtigeedu dhaw yahay iyo sii wadida nidaamka dimuqraadiyadda dalka balse siduu immika u muuqdo ololahooda cusub ee shir guddoonka wakiilladu haddii is bahaysigoodu daaran yahay mid ay kaga hortegayaan sharciyadda diiwaangelinta ururada, wuuxu markaa is bahaysigoodu dhaawac ku yahay geeddi socodka dimuqraadiyadda Somaliland, waana mid dhaxalsiin karta iyaga inay lumiyaan kalsoonida bulshadii taageertay.
Bulshada Somaliland ee dhalinyarada u badani inay u bislaadeen nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashada cidda ay doonayaan, lagana guuray in hayb iyo qabiil wax lagu raadiyo waxaa tusaale fiican kaaga fiican in labada Xildhibaan ee Barkhad Jaamac Batuun iyo Cabdikariim Axmed Mooge ee u tartamay Golaha Wakiillada iyo Golaha Deegaanka Degmada Hargeysa iyo Gobolka Maroodijeex siday isugu xigaan iyagoo ku ololeeyay inaan qabyaalad lagu dooran ay ku kasbadeen guusha ballaadhan ee 46,000+ cod taasoo ka dhigan inay labadooda oo kaliyi u keenaan ku dhawaad 50% wadarta codadka guud ee Xisbiga WADDANI ka helay Gobolka Maroodijeex oo haddii kale aan siniba uga badnaadeen codadka guud ee Xisbiga UCID ka helay Maroodijeex. Waxaa sidoo kale laga dareemayaa is bedelka togan iyo u bislaanshaha dimuqraadiyada ee bulshada natiijooyinka iyo kuraasta ee xisbi kasta dhammaan gobollada dalka.
Sidaa darteed, si aan ka duwanayn doorashadii dalka ka dhacday waa inay is doorashada goleyaasha deegaankuna noqotaa mid aan laga xayuubin mabaadii’da dimuqraadiyadda ay leedahay iyo madaxbanaanida go’aan gaadhista doorashada guddoonkooda sida xeerarka khuseeya waafaqsan, isla markaana aan looga faa’iidaysan dano xisbi iyo ujeedooyin siyaasadeed ka luminaya golaha wadada saxda ah. Dhinaca kale, talo wadaaggii, is aaminkii iyo ka wada shaqayntii maslaxadda guud ee seddexda xisbi iyo ama mucaaradka iyo xukuumaddu waa in la sii wado oo aanu dabac ku iman.
Waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga, Axsaabta Mucaaradka Somaliland yaanay xaqal daacin guushii doorashadii taariikhiga ahayd ee Somaliland iyo hanaqaadka dimuqraadiyadda bulshada Somaliland.